I-Spain sigqame nhlangothi zonke kwi-Euro 2012 | IOL Isolezwe
I-Spain sigqame nhlangothi zonke kwi-Euro 2012
Isolezwe / 3 July 2012, 1:22pm /
NGEMUVA kokuqopha umlando kweSpain iba yizwe lokuqala ukuvikela isicoco se-Euro inqoba ngo 4-0 ku-Italy ngeSonto ebusuku eKiev, e-Ukraine, kuphinde kwabukwa yona emiklomelweni yabadlali abebegqamile kulo mqhudelwano.
ISpain idla lesi sicoco nje ibivele ingompetha baso emva kokuyinqoba kwayo ngo-2008 eViena, e-Austria. Maphakathi nalokhu kuhlabana leli qembu lesizwe linqobe neseNdebe yoMhlaba ka-2010 ebilapha eNingizimu Afrika nakho obekungokokuqala ukuthi izwe linqobe imiqhudelwano emithathu emikhulu ilandelana.
Kuqale ngokuthi iSpain ibe nabadlali abahlanu kwabangu-11 eqenjini elihlanganiswe yizikhulu ze-Euro elenziwe ngabadlali ababegqame ukubedlula bonke kulo mqhudelwano.
Laba badlali kube ngo-Iker Casillas, okumenza unozinti womqhudelwano kwazise ungenelwe yigoli elilodwa kuphela, Jordi Alba, Gerrard Pique, Andreas Iniesta (oqokwe njengomdlali ovelele ku-Euro 2012) noDavid Silva.
UFernando Torres oyifolosi leChelsea yase-England uqokwe njengomshayimagoli ovelele kwazise inethi uyibone kathathu kulo mqhudelwano.
Nakuba lo mgadli ubelithola kancane ithuba kulo mqhudelwano kodwa ukhombisile ukuthi useqophelweni eliphezulu njengoba egcine egoduke nesicathulo segolide.
Abaningi bayazibuza ukuthi uqokwa ngaliphi uTorres lapha kodwa ngokwemithetho ye-Euro uma abadlali belingana ngamagoli kube sekubhekwa ukuthi ngaphandle kokuwashaya akhona yini amanye awakhele ozakwabo.
Unqobe kanjalo-ke lo mgadli ekubeni ebebambene noMario Gomez weGermany, Mario Mandzukic weCroatia, Alan Dzagoyev weRussia, Mario Balotelli we-Italy noCristiano Ronaldo wePortugal.
Umqeqeshi weSpain, uVicente del Bosque, uzakhele owakhe umlando eba wumqeqeshi wokuqala emlandweni webhola ukudla i-Euro, iNdebe yoMhlaba neChampions League, ngo-2000 nango-2002 neReal Madrid.